Dawlada Itoobiya Oo Ka Hadashay Mashruuca Berbera Corridor | Saxil News Network
Dawlada Itoobiya Oo Ka Hadashay Mashruuca Berbera Corridor
June 13, 2019 - Written by editor
Hargeysa(saxilnews.com):-Dawlada federaalka ah ee Itoobiya ayaa ka hadashay mashruuca lagu dhisayo waddada Berbera Corridor.
Wasiirka maaliyada dawlada Itoobiya Axmed Shide oo wariye Cabdisalaan Hereri oo ka tirsan Universaltv waydiiyey in heshiisyadii ay Itoobiya la gashay soomaaliya aanay waxba ka fulin ayaa waxa uu sheegay inay jiraan mashaariic socda.
Wasiir Axmed Shide oo ka hadlayey heshiisyadii ay la galeen soomaaliya ayaa ku daray heshiiskii Berbera Corridor “Run ahaantii meelo ay wax ka socdaan way jiraan tusaale ahaan waxa jira dedaalo laga wado Berbero Corridor, kuwaas oo la doonayo in maalgashi laga helo iyada oo dedaalo laga wado wadooyinka isku xidha Berbera iyo Tog-wajaale.”
Wasiir Axmed Shide oo jawaabtiisa sii wata ayaa intaas raaciyey ” xaalada soomaaliya waxa muhiim ah in nabad galyada la sii xoojiyo, wadooyinka iyo dekedahana in soomaaliya ay dhisto waa muhiim, isbadalka wadamada geeska Afrika waxa uu si cusub u sahlayaa inaanu soomaaliya si wada jir ah u qorshayno.” Ayuu yidhi wasiir Axmed Shide.